Warmly Welcome to Shwe Wut Yi Trading Co.,Ltd
Home Men & Ladies Wear PROEA Myanmar Home Supply Gallery
Warmly Welcome To Sein Wut Yi Trading Company Limited
Welcome to Sein Wut Yi Trading
Welcome To Sein Wut Yi Trading Co., Ltd.
Men & Ladies Wear
၁) နူးညံ့သော ၀ါးသားဖြင့် ပြုလုပ် ထားသောကြောင့် ၀တ်ဆင်ရာတွင် ပေါ့ပါးစေပြီး သက်တောင့်သက်သာ ရှိစေခြင်း
၂) သဘာဝ သါးမျှင်များမှ ပြုလုပ် ထားသောကြောင့် ၀တ်ဆင်သူ၏ အသားအရေကို အခြား Side Effect များ မဖြစ်စေခြင်း
၃) ခိုင်ခန့်ပြီး နူးညံ့သော သားရေခါး ကြိုးပြားများကို သုံးထားသောကြောင့် ခါးတွင် နာကျင်မှု မရှိစေဘဲ တာရှည်ခံခြင်း
No.87, South Building , Ground Floor, Zaycho, Mandalay. Phone: 02-31469,09-5141784.
No (E-10), 84th ,Between 27th & 28th , Mann Myanmar Plazza, Mandalay. Phone: 02-4000299,09-2009571,09-5531888.
No (57,58) (D- Building ), Ground Floor, Zaycho, Mandalay. Phone:02-36909(Ext:3096).02-28682
No (43,44), 78th Street, Diamond Plazza Centre, Mandalay.09-6503084
Myanmar Home Supply
Myanmar Home Supply PROJECT,HOTEL,HOSPITAL,OFFICE များအတွက်လည်း အထူးဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးပြီး သီးသန့်အော်ဒါများ မှာယူနိုင်ပါသည်။
2) PVC Strip
3) Aluminium မျက်နှာကျက်ပြား
4) Laminate ကြမ်းခင်းပြားများ
5) Vinyl ကြမ်းခင်းအမျိုးမျိုး တို့ကို အထူးလျှော့ဈေးနှုန်းများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
PVC Strip ရေစိုဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ ဆေးသုတ်ရန် မလိုခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရလွယ်ကူခြင်း၊ အလွယ်တကူ တပ်ဆင်နိုင်ခြင်း၊ ဈေးနှုန်းသက် သာခြင်း တို့ကြောင့် အိမ်အပြင် တံစက်မြိတ် မျက်နှာကျက်နေရာများတွင် လျှာထိုးပြားအစား အလှဆင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ PVC Strip များဖြင့် မျက်နှာကျက် အလှဆင်ခြင်းများ အပြင် နံရံ အလှဆင်ခြင်းများလည်း ပြုလုပ် ပေးပါသည်။
Aluminium Ceiling ရေငွေ့နှင့် အပူငွေ့ကို ခံနိုင်ခြင်း၊ ဆေးသုတ်ရန်မလိုခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေး လုပ်၍ ရခြင်း၊ အလွယ်တကူ ဖြုတ် တပ် နိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် Office, Hotel, Hospital, Coffee Shop, Showroom နှင့် မီးဖိုခန်းနှင့်ရေချိုးခန်း များတွင် အသုံးပြုရန် အထူးသင့်လျှော်ပါသည်။
Our Service Designer များဖြင့် Design ရေးဆွဲပေးခြင်း အခန်း အနေအထားနှင့် လိုက်လျောညီထွေမည့် Material ရွေးချယ်ပေးခြင်း ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများဖြင့် အိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်လံ တပ်ဆင်ပေးခြင်း Our Guarantee ဈေးနှုန်းမျှတပြီး ဆန်းသစ်လှပ စတိုင်ကျကာ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော ကြာရှည်ခံသည့် ပစ္စည်းများ ဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။
No (624), 80th , Between 37th & 38th , Mandalay. Tel : 02-73638,09 793777777,09 797977773,09 79797774.
© Sein Wut Yi Trading Co.,Ltd.
Designed By: Etrade Myanmar